Niaro An’ilay Mpanao Gazety Nogadraina ny Didim-pitsarana Makedoniana. · Global Voices teny Malagasy
Tomislav Kezarovski tamin'ny 23 Okt 2015 tao amin'ny fahatsiarovana ny fihetsiketsehana 2013 tamin'ny famotsorana azy, izay nahitana fidirana an-tsehatry ny polisy hanohitra ireo mpanao fihetsiketsehana. Sary: Filip Stojanovski, CC BY.
Afaka manantena fanafoanana ofisialy an'ireo fiampangana azy ara-politika ihany ilay mpanao gazety Makedoniana Tomislav Kezarovski nony farany, rehefa avy niady hahazo izany efa ho dimy taona izao.
Voasazy higadra 4 taona sy tapany an-tranomaizina noho ny fiampangana namboamboarina i Kezarovski tamin'ny Oktobra 2013, saingy nanafaka azy ny didim-pitsarana vaovao mikasika ny raharaha momba izany.
Tamin'ny volana Mey 2013, raha nanadihady ny nahafatesan'ny mpiara-miasa iray, nosamborina i Kezarovski (soratana matetika koa hoe Kežarovski na Kezharovski) ary voampanga noho ny lahatsoratra navoakany tamin'ny taona 2008 momba ny famonoana olona iray ambony tamin'ny taona 2005.
Nomelohin'ny fitsarana Makedoniana ity mpanao gazety ity noho ny famoahana ny mombamomba ilay mpijoro vavolombelona arovana tamin'ny fitaterany ny famonoana an'i Lazar Milosevski, 57 taona sy ny hetsika nataon'ny polisy manodidina ny famonoana. Nanonona lehilahy iray izay voalaza taty aoriana fa noteren'ny polisy hanao vavolombelona mandainga, milaza firaisana tsikombakomba ao anatin'ny fitsarana i Kezarovski. Nohamafisina tamin'ny didim-pitsarana tamin'ity herinandro ity izany fiampangana izany. Tany am-boalohany, nanova ny fanambarana voalohany tao amin'ny fitsarana ny mpijoro vavolombelona manan-danja, niaiky ho nivadi-dela (nandainga), ary voaheloka noho ny fanomezana fijoroana vavolombelona diso.
Naharitra efa ho folo taona ny fitsarana momba ny raharaha famonoana an'I Milosevski izay lohahevitry ny tati-baovao 2008 nataon'i Kezarovski, nisy ny fitsarana niverina in-dimy, satria nanafoana ny didim-pitsarana tany am-boalohany in-efatra ny Fitsarana Avo. Nilaza ny didim-pitsarana farany fa tsy nisy porofo ny fanamelohana ny olona voalohany ahiahiana tamin'ny famonoana nitranga tamin'ny taona 2005. Nangataka fanadihadiana vaovao ny fianakavian'i Milosevski ary koa fitsarana ahitana porofo mikasika ireo olon-kafa ahiahiana, izay tsy noraharahiana noho ny fanafenana ny marina.
Nandany ny ampahany tsara indrindra tamin'ny telo taona manaraka ho gadra politika i Kezarovski, ary tratran'ny fepetra fampijaliana.
Tamin'ny taona 2015, nanoritsoritra ny fepetra niainany nandritra ny ankamaroan'ny fotoana nigadrany izy:
…a dimly lit cell of 4 by 2 and a half meters, including the toilet. Four, and sometimes five, persons had to live within these 8-9 square meters… As soon as you enter any of these cells, the sharp stench of mold and aroma of urine nest into your nose and throat.
The cells were infested with insects, including large centipedes, which crawled over the prisoners when they went to sleep. The toilet was disinfected with hydrochloric acid every Thursday, and prisoners had to suffer inhaling the vapors…
… efitra kely zara raha misy hazavana, izay mirefy 4 metatra amin'ny 2 metatra sasany, ao anatin'izany ny efitra fidiovana. Efatra, indraindray dimy, ny olona tsy maintsy miaina ao anatin'ireo efitra mirefy 8-9 metatra toradroa. Raha vao miditra ao amin'ireo efitra ianao, miditra any anatin'ny oronao sy ny tendanao ny fofona maimbo boina sy ny fofona amany.
Feno bibikely ny efitra, anisan'izany ireo trambo lehibe, izay mandady eny amin'ireo gadra rehefa matory izy ireo. Diovina amin'ny asidra klôridrika isaky ny Alakamisy ny efitra fivoahana, ary voatery mijaly amin'ny fanatelomana etona ireo gadra …
Rehefa nipoitra ireo zava-nitranga ireo, nihabetsaka ihany koa ny fanontaniana mikasika ny antony nanenjehana an'i Kezarovski tamin'ny taona 2013 noho ny asany tamin'ny fitantarana taona 2008 – efa ho dimy taona taorian'ny zava-misy .
Tamin'ny fotoana nisamborana azy, niasa tamin'ny tantara momba ny fahafatesana namana mpanao gazety, Nikola Mladenov, izay maty araka ny filazan'ny manampahefana fa noho ny “lozam-pifamoivoizana mahazatra” i Kezarovski. Azo antoka fa ny fisamborana sy ny fanamelohana an'i Kezarovski no nanakana ny adihevitry ny daholobe mikasika ny fahafatesan'i Mladenov tamin'izany fotoana izany.
Mpanao gazety sady tonian-dahatsoratra, Nikola Mladenov (1964-2013) tamin'ny taona 2012. Saripikan'i Vančo Džambaski tao amin'ny Metamorphosis Foundation, CC B½-SA.
Nantsoina ofisialy hoe “Liquidation (Famaram-pananana)” ny raharaha sy ny fanentanana ataon'ny governemanta manohitra ilay mpanao gazety, ary nomelohin'ireo fikambanana mpanao gazety matihanina, fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ary ny solontenan'ny OSCE ho an'ny fahalalahan'ny Media. Niresaka momba izany tao anatin'ny zava-misy amin'ny fihenan'ny fahalalaham-pitenenana ao Makedonia ihany koa ny Vaomiera Eoropeana.
Taorian'ny didim-pitsarana, namoaka fanambarana momba ny raharaha tao amin'ny Facebook-ny tamin'ity herinandro ity i Kezarovski, izay nandany herintaona sy sivy volana an-tranomaizina ary volana maromaro tamin'ny trano ambenana:
Lahatsoratr'i Kezarovski tao amin'ny Facebook maneho hevitra mikasika ny didim-pitsarana farany tamin'ny raharaham-pitsarana antsoina hoe “Orese.”
Milaza ny fanazavana ny didim-pitsarana fa sady voaaro no tsy tandindonin-doza ny mpijoro vavolombelona ‘voaaro’ ny mpijoro vavolombelona mandainga izay nijoro vavolombelona araka ny torolalan'ny polisy miafina araka ny nosoratako tao amin'ny gazety mpivoaka isan-kerinandro “Reporter 92″ sy izay nanaovana ahy ho olona ahiahiana, helohina ary nogadraina.
Nahoana aho no nigadra tany am-ponja? Nahoana aho no tsy salama vokatr'izany?
Ary ankehitriny, Rtoa mpampanoa lalàna Lile Stefanova, inona no hataontsika? Ary ankehitriny, ry Rtoa mpitsara Ranja Mihajlova, Atoa Gjoko Ristov sy Rtoa Dijana Gruevska – Ilievska inona no hataontsika ankehitriny? Inona no holazainareo ho fiarovana anareo?
Taorian'ny hetsi-panoherana maromaro sy ny fanenjehana ara-pitsarana, navoaka ny fonja noho ny antony ara-pahasalamana i Kezarovski tamin'ny Janoary 2015. Nanomboka tamin'izany, lasa mpiady ho an'ny fanatsarana ny fepetra fototra iainana eny amin'ny fonjan'i Makedonia izy.
Tamin'ny taona 2015, nampiseho tsy fahaiza-manao mikasika ny fanadihadiana momba ny fahafatesan'i Nikola Mladenov ny famoahana ny resaka an-tariby noraketin'ny polisy miafin'i Makedonia tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Niantso ny hamerenana ny famotorana avy eo ny mpitarika mpanohitra Zoran Zaev (izay lasa praiminisitr'i Makedonia tamin'ny 31 may 2017).
Azo inoana fa hohavaozin'ny rafi-pitsarana navaozina ny fanadihadiana ny fahafatesan'i Mladenov, ary hametraka fitoriana ireo manampahefana tafiditra tamin'ny famonjàna azy i Kezarovski.